अध्याय:: कसरी एक प्रतिस्पर्धी लोगो विश्लेषण संचालन - Print Peppermint
खाता सम्पादन गर्नुहोस्
मुद्रण सर्त शब्दावली
नमूनाहरू अर्डर गर्नुहोस्
नि: शुल्क रचनात्मक परामर्श
हाम्रो क्रिएटिभ डाइरेक्टर, अस्टिनसँग तपाईंको परियोजनाबारे छलफल गर्न २० मिनेटको कल बुक गर्नुहोस्।
अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस् >
नमूना प्याक अर्डर गर्नुहोस्
भर्खरै सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको 25 भन्दा बढी अद्भुत नमूनाहरूले भरिएको।
एउटा नमूना प्याक अर्डर गर्नुहोस् >
सबै व्यापार कार्डहरू
उठाइएको स्पट चमक
गोल गरिएको कुना
व्यापार कार्ड डिजाइन सेवा
कस्टम कार्ड कन्फिगरेटर
तपाईले खर्च गर्न सक्नुहुने धेरै विशेष फिनिसहरूसँग पूर्ण रूपमा अनुकूलन व्यवसाय कार्ड कन्फिगर गर्नुहोस्!
अब कन्फिगर गर्नुहोस्
जंगली रचनात्मक नमूनाहरू!
विभिन्न कागज र विशेष फिनिश को 25 भन्दा बढी अद्भुत नमूनाहरु भरिएको।
अनुकूलन पोस्टकार्ड कन्फिगरेटर
प्रत्येक एकल विशेषतालाई अनुकूलन गरेर आफ्नो सपनाको पोस्टकार्ड बनाउनुहोस्।
तपाईंको अब कन्फिगर गर्नुहोस् >
उठाइएको पन्नी पोस्टकार्डहरू
सुन, चाँदी, वा होलोमा उठाइएको यो धातुको पन्नीको साथ ग्यारेन्टी ध्यान लिनुहोस्!
पसल उठाइएको पन्नी पोस्टकार्डहरू >
अध्याय:: एक प्रतिस्पर्धी लोगो विश्लेषण कसरी गर्ने
नोभेम्बर 24, 2019 | ब्रान्डिङ, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन
एउटा साधारण सत्य ब्राण्ड लोगो डिजाइन को अधिक मार्गदर्शन गर्न पर्छ: यो एक्लोसनमा कहिल्यै देखिने छैन। चाहे प्रत्यक्ष तुलनामा वा अप्रत्यक्ष रूपमा समयसँगै, तपाईंको दर्शकहरूले अन्य लोगोहरू देख्नेछन्, र अनिवार्य रूपमा यी लोगोहरू तपाइँसँग तुलना गर्नेछन्। तपाइँ कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ध्यान प्राप्त गर्न र राख्नको लागि एक मुख्य भूमिका खेल्छ।
यदि तपाई यस महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई दिमागमा राख्नुहुन्न भने पनि उत्तम लोगो असफल हुनेछ। त्यसैले डिजाइनको अघि तपाईले आफ्नो प्रतिस्पर्धी वातावरण लाई बुझ्नु पर्छ। तपाइँले कसरी लोगो बनाउने भनेर जान्नु आवश्यक छ जुन संज्ञानात्मक असन्तुष्टि बिना परिचयको बाहिर खडा हुन्छ। अर्को शब्दहरु मा, तपाइँ एक प्रतिस्पर्धी लोगो विश्लेषण आयोजित गर्न आवश्यक छ।
त्यो कदम चाल्नु जस्तो जटिल छैन जस्तो देखिन्छ। साधारण चरण-देखि-चरण प्रक्रियाको माध्यमबाट, तपाईं यो निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको लोगो मनमा प्रतिस्पर्धाको साथ निर्माण गर्न सकिन्छ, घरको शक्ति र ड्राईभिंग कमजोरीहरूमा।
१) तपाईंको सीधा प्रतिस्पर्धा परिभाषित गर्नुहोस्
पहिलो चरण पनि सबैभन्दा स्पष्ट हुन सक्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, तपाईंले वास्तवमा कसको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्दछ। यसको मतलब कुनै पनि चीजको संख्या हुन सक्छ, त्यसैले हामी यसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा तोडिदिनेछौं।
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी तुलनात्मक उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछ। तिनीहरू सामान्य रूपमा तपाईंको उद्योगमा छन्, र तपाईं जस्तै समान दर्शकहरूसँग कुरा गर्नेछन्। तिनीहरू तपाईंको दीर्घकालीन अस्तित्व र सफलताको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हुन्। किन तपाईं तिनीहरू को हुन् परिभाषित गरेर सुरू गर्नु पर्छ।
तपाईं पहिले नै ठूलो बजार दृष्टिकोणबाट एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण संग परिचित हुन सक्छ। समान आधारभूत सिद्धान्तहरू यहाँ लागू हुन्छन्। तपाईंको प्रतिस्पर्धा को हो बुझ्नुहोस्, त्यसोभए उनीहरू के गर्छन् भनेर हेर्न थाल्नुहोस्। तर त्यो पहिलो परिभाषा बिना, तपाईं पछिका चरणहरूमा पुग्न सक्नुहुन्न।
२) तपाईंको अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको अन्वेषण गर्नुहोस्
तपाईंको उद्योग भित्र र तुलनात्मक उत्पादनहरूका साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी, तपाईंको मात्र खतरा हो भनेर अनुमान गर्न गल्ती नगर्नुहोस्। यसको सट्टा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा यत्तिको महत्व हुन सक्छ। यी ती कम्पनीहरू वा संगठनहरू हुन् जुन तपाईंको दर्शकले ध्यान दिन्छन् उनीहरूको ध्यान तपाईंको ध्यानमा राख्छन्।
यसको बारे एक सुपरमार्केट को बारे मा सोच्नुहोस्। यदि तपाईं क्यान्ड सूप बेच्नुहुन्छ भने, तपाईंको सीधा प्रतिस्पर्धीहरू अन्य सूप र प्याकेज गरिएको खाना ब्रान्ड हुन्। तर तपाईंको दर्शकहरूले यसको पैसा अनाज, ताजा मासु, वा तरकारीहरूमा सायद खर्च गर्ने निर्णय गर्न सक्दछन्। त्यो तपाईंको अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हो। यो विचार गर्दै कि यसले तपाईंको श्रोताहरूलाई वास्तवमा तपाईंबाट खरीद गर्नबाट रोक्न सक्छ, यो यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।
केवल तपाइँको सीधा प्रतिस्पर्धीहरु जस्तै, यी ब्रान्डहरु मा लोगो तपाइँ को लागी ध्यान दिनु पर्छ। उही समयमा, माथिको पहिलो चरण विपरीत, यो विस्तृत हुन असम्भव छ। यसको सट्टामा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी हुन वा नह्न सक्ने कम्पनीहरूको अन्वेषण गर्नुहोस् र तलका चरणहरूको लागि केहि विशेष रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू छान्नुहोस्।
)) प्रासंगिक स्कोर बनाउनुहोस्
अर्को, यो तपाइँको प्रतिस्पर्धा मापन गर्न को लागी समय हो। एक तरिका जुन तपाइँ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ प्रासंगिकता स्कोर निर्माण गरेर हो। तपाइँको लागि दिइएको प्रतिद्वन्द्वी ब्रान्ड कत्तिको सान्दर्भिक छ, र तपाइँको दर्शकहरूलाई उनीहरूले तपाइँको लागि खरीद वा विचार गर्ने निर्णयको रूपमा?
तीन देखि चार गुणहरूको साथ सुरू गर्नुहोस्, र प्रत्येकलाई स्कोर तोक्नुहोस् कि यो तपाईंको नजिकमा कसरी प closely्क्तिबद्ध हुन्छ। त्यसो भए, अ tal्कहरू मिलाउनुहोस् र र a्कि mechanism मेकानिजमको रूपमा जोड प्रयोग गर्नुहोस्। अब, तपाईंसँग प्रतिस्पर्धाहरूको प्राथमिकता सूची छ जुन तपाईं तल प्रत्येक चरणको प्रभावकारिता अधिकतम बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
)) लोगोहरूको राम्ररी मूल्यांकन गर्नुहोस्
व्यापारमा तल ओर्लौं। अघिल्लो चरणबाट तपाईंको सूची अनुसार प्रत्येक शीर्ष ब्राण्डहरूका लागि, हालको लोगो फेला पार्नुहोस्। त्यसो भए, यसलाई मूल्या to्कन गर्न सुरू गर्नुहोस्। पहिलो, एक्लोसनमा। कुन र colors्गले ब्रान्डले प्रयोग गर्दछ, यसले कसरी पाठ एकीकृत गर्दछ, र कसरी उनीहरू ह्वाइटस्पेस लिभरेट गर्छन्?
अध्याय in मा आधारभूत डिजाइन सिद्धान्तहरू यो मूल्या conducting्कन गर्नका लागि उत्तम गाईड हुन्। तपाईंले छनौट गर्नुभएको हरेक प्रतिस्पर्धी ब्रान्डले यी प्रत्येक कारकहरूसँग कसरी सम्बन्धित छ भनेर अनुमान लगाउने प्रयास गर्नुहोस्।
त्यसो भए, एक व्यक्तिगत घटक थप्नुहोस्: तपाइँ प्रत्येक लोगो कती 'मनपर्दछ'? तपाईंको श्रोताको ध्यान खिच्ने र कोर ब्रान्ड सन्देश सञ्चार गर्नेमा यो कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ? यदि तपाईंसँग स्रोतहरू छन् भने, सर्वेक्षणहरू मार्फत केही अनुसन्धानहरू सञ्चालन गर्न डराउनु हुँदैन वा तपाईंको ग्राहकहरूको राय लिनको लागि फोकस समूह पनि।
)) प्रत्येक मार्क भर समानताहरू खोज्नुहोस्
माथिको चरणले प्रत्येक प्रतिस्पर्धी लोगोलाई एक्लोसनमा विचार गर्दछ। अब, उनीहरूको समानताहरू फेला पार्न तिनीहरूलाई सँगै ल्याउने समय हो। विशेष रूपमा तपाइँको सीधा प्रतिस्पर्धा को लागी, यो बुझ्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि उद्योग मा प्रत्येक लोगो के समावेश तत्वहरु। एथलेटिक पोशाकको लागि, उदाहरणका लागि, तपाई प्रत्येक लोगो समावेश आन्दोलन पाउनुहुनेछ।
जब सबैजनाले यो गर्दछ, तपाईंसँग एक राम्रो कारण हुनुपर्दैन। लोगो तत्व समानताको बिन्दु हुन्छ, उपभोक्ता द्वारा एक अपेक्षा जुन तपाईंले पूरा गर्नुपर्दछ। यदि तपाइँ बिभिन्न मार्गमा जान छनौट गर्नुहुन्छ भने, यो निश्चित गर्नुहोस् कि यो त्यस्तो तरीकाले हो जुन तपाईंको श्रोताको लागि संज्ञानात्मक असंतोषको परिचय दिदैन।
)) प्रत्येक लोगोको भिन्नता खोज्नुहोस्
समताका पोइन्टहरू स्थापना गरिसकेपछि, समय छ कुनै कडा ब्रान्ड बनाउने तत्वहरूको खोजी गर्ने: समयको बिन्दुहरू। यो त्यहि हो जहाँ तपाई मूल्यांकन गर्न थाल्नुहुन्छ जहाँ प्रत्येक ब्रान्डले सचेत छनोट गर्दछ यसको प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा फरक हुन, र किन उसले त्यो छनौट गरेको हुन सक्छ।
यी भिन्नताहरू केहि घटनाहरू हुनसक्दछन्। प्राय: पटक, ती हुँदैनन्। विचार गर्नुहोस् कि तपाईं १००० शब्द ईबुकको अध्याय in मा हुनुहुन्छ विशेष रूपमा लोगो डिजाइनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै। अन्य ब्रान्डहरू कडा परिश्रम गर्दछन्। फेरि, तपाइँ के विचार गर्नुहुन्छ मतभेदहरू हुन्, र किन ती स्थानमा हुन सक्छ नोट गर्नुहोस्।
)) अवधारणात्मक नक्शा, लोगो शैली बनाउनुहोस्
अन्तमा, यो सबै सँगै राख्ने समय हो। तपाईंले आफ्नो अधिक विस्तृत प्रतिस्पर्धी विश्लेषणमा गरेको हुनसक्दछ, ब्रान्ड र तपाईंको दर्शकहरूको लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण दुई वा तीन आयामहरूमा आधारित अवधारणा नक्शा बनाउनुहोस्। त्यसो भए, यी आयामहरूमा प्रत्येक प्रतिस्पर्धी लोगो स्कोर गर्नुहोस्, र यसलाई एक्सेल वा अन्य उपकरणमा नक्सा गर्नुहोस्।
तपाईले फेला पार्नुहुने एक विस्तृत सिंहावलोकन हो जहाँ प्रत्येक कम्पनीको लोगो खडा हुन्छ। तपाईंले खाली ठाउँहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ जुन हाल कुनै पनि ब्रान्डले ओगटेको छैन।
यो तपाइँको अवसर हो। जम्प इन गर्नुहोस्, र लोगोको लागि योजना शुरू गर्नुहोस् जुन यसको प्रतिस्पर्धासँग मेल खान्छ जहाँ यसको आवश्यक पर्दछ, तर अद्वितीय मार्गहरूमा जान्छ जहाँ अरूले गर्दैन। आफ्नो प्रतिस्पर्धा को माध्यम बाट आफ्नो स्थिति परिभाषित गर्नुहोस्, र तपाईं निर्माण शुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ।
थप ग्रुभी सामानहरू
व्यवसाय कार्डको साथ प्रिन्ट गर्नुहोस् Print Peppermint
हाम्रो ग्राफिक डिजाइन सेवाहरू भाडामा लिनुहोस्
व्यापार कार्ड नमूना प्याक आदेश
तपाईंको कस्टम मुद्रण परियोजना को लागी एक अनुरोध गर्नुहोस्
← अध्याय:: लग्सका प्रकारहरू, र किन उनीहरूले महत्त्वपूर्ण छन्
अध्याय:: डिजाइन प्रबन्ध →
प्राप्त Peppermint अपडेटहरू!
कुपनहरूको लागि, गोप्य प्रस्तावहरू, डिजाइन ट्यूटोरियलहरू, र कम्पनी समाचारहरू।
न्यूजलेटर साइनअप / खाता दर्ता (पपअप)
"*"आवश्यक क्षेत्रहरु लाई संकेत गर्दछ
कृपया एउटा नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् 10 लाई 10.
६ + ४ भनेको के हो ?
यो क्षेत्र प्रमाणीकरण उद्देश्यका लागि हो र अपरिवर्तित बाँकी गर्नुपर्छ।
तपाईंको ब्रान्डको आवाज कसरी विकास गर्ने (र कायम राख्ने)
फोटोहरूलाई पाठ फाइलहरूमा रूपान्तरण गर्नका लागि शीर्ष5अनलाइन उपकरणहरू
शुरुवातकर्ताहरूको लागि व्यावसायिक देखिने भिडियोहरू बनाउनको लागि 10 सुझावहरू
तपाईंको श्रोतालाई चकित पार्ने डिजिटल प्रिन्टहरू सिर्जना गर्दै
२०२२ मा तपाईले नि: शुल्क अनलाइन एसईओ कहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ?
विज्ञापन कला ब्यानर र साइनेज ब्रान्डिङ व्यापार व्यापार कार्ड आधारभूत व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा रंग डिजाइन डिजाइन हास्य डिजाइन सफ्टवेयर DIY उद्यमी प्रसिद्ध ब्रान्डहरू फन्टहरू स्वतंत्र नि: शुल्क संसाधन ग्राफिक डिजाइन इतिहास दृष्टान्त प्रेरणा सूची लोगो डिजाइन मार्केटिङ Pantone कागज फोटोग्राफी Photoshop प्रिन्ट डिजाइन मुद्रण प्रिन्टिंग बेसिक्स उत्पादन डिजाइन रियल एस्टेट स्वरोजगार एसईओ सुरूवात पर्चा विद्यार्थी टी-शर्ट डिजाइन टेम्प्लेट ट्यूटोरियल typography UX भिडियो वेब डिजाइन
नि: शुल्क उद्धरण र परामर्श अनुरोध गर्नुहोस्
तपाईंको प्रोजेक्ट वर्णन गर्नुहोस्(आवश्यक)
तपाईंको प्रोजेक्टको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस् र हामी एक निःशुल्क रचनात्मक परामर्श र मूल्य निर्धारण दिन्छौं।
नमूना कलाकृति वा प्रेरणादायक छविहरू?
फाइलहरू यहाँ ड्रप वा
अधिकतम फाईल आकार: 25१२ MB
तिम्रो बजेट के हो?(आवश्यक)
100 वा कम (USD / EUR)101 - 250 (USD / EUR)250 - 500 (USD / EUR)500 - 750 (USD / EUR)1000+ (USD / EUR)धेरै ठूलो परियोजना!म निश्चित छुँइन।
हामीले कहाँ तपाइँको उत्पादन सिफारिश र उद्धरण ईमेल गर्नुपर्छ?
इमेल प्रविष्ट गर्नुहोस् इमेल पुष्टि
+ + What के हो?(आवश्यक)
धिक्कार छ घोटाला गर्नेहरु ।
सामाजिक मा हामीलाई खोज्नुहोस्
डिजाइन सुझावहरू र विशेष छुटहरूको लागि सामेल हुनुहोस्
छुट र गोप्य प्रस्तावहरू पाउनुहोस्!
हाम्रो न्यूजलेटरमा शामिल हुनुहोस् र तपाईंको पहिलो अर्डरमा १० पाउण्ड पाउनुहोस्।
प्रतिलिपि अधिकार २०१ - - Print Peppermint इंक
हाम्रो कुकी नीति
यो वेबसाइटले तपाइँको अनुभवलाई सुधार गर्न कुकीज प्रयोग गर्दछ। हामी मान्दछौँ कि तपाईं यससँग ठीक हुनुहुन्छ, तर तपाई चाहानुहुन्छ भने तपाईले अप्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ।स्वीकारअस्वीकार गर्नुहोस् थप पढ्नुहोस्
फंक्शनल कुकिजले केहि कार्यक्षमताहरू गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा वेबसाइटको सामग्री साझा गर्न, फिडब्याक स collect्कलन गर्नुहोस्, र अन्य तेस्रो पार्टी सुविधाहरू।
प्रदर्शन कुकीहरू वेबसाइटका कुञ्जी प्रदर्शन अनुक्रमणिका बुझ्न र विश्लेषण गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन आगन्तुकहरूको लागि उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
विश्लेषणात्मक कुकीजहरू वेबसाइट भ्रमण गर्ने आगन्तुकहरू बुझ्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी कुकीजले मेट्रिक्समा आगन्तुकहरूको संख्या, बाउन्स रेट, यातायात स्रोत, इत्यादिमा जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
विज्ञापन कुकीहरू प्रासंगिक विज्ञापन र मार्केटिंग अभियानको साथ आगन्तुकलाई प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी कुकीजले वेबसाईटहरूमा आगंतुकहरूलाई ट्र्याक गर्दछ र अनुकूलित विज्ञापनहरू प्रदान गर्न जानकारी स collect्कलन गर्दछ।
अन्य वर्गीकृत कुकीहरू ती हुन् जुन विश्लेषण भइरहेको छ र अहिले सम्म कोटिमा वर्गीकरण गरिएको छैन।
आफ्नो कार्ट बचत गर्नुहोस्
कार्ट शीर्षक प्रविष्ट गर्नुहोस्
शीर्षक आवश्यक छ
आफ्नो कार्ट साझेदारी गर्नुहोस्
कार्ट प्रतिस्थापन गरिएको छ
कार्ट बचत गर्न पहिले लगइन गर्नुहोस्